Gummy နည်းနည်း (လွယ်ကူသည်) - သကြားလုံး
gelatin နှင့်ဖျော်ရည်နှင့်အတူလုပ်လွယ်ကူသော gummy သကြားလုံးစာရွက်!
ငါသည်ဤလွယ်ကူသော gummy စာရွက်ကိုချစ်။ ဖျော်ရည်များ၊ သောက်စရာများ၊ gelatin နှင့်ပြောင်းဖူးရည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအ Gummies ပျော့ပျောင်းသော chewy ဖြစ်ကြပြီးကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်အသံထွက်သို့မဟုတ်ပါတီပွဲ၌ပြုသကဲ့သို့အဖြစ်ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်!
ပြောင်းဖူးရည်အသုံးပြုခြင်း Gummy ချက်ပြုတ်
ဒီ gummy စာရွက်ကိုတည်ငြိမ်စေသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာပြောင်းဖူးရည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းဖူးရည်သည် Gummy ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးပြီး၎င်းကိုရေများများမထည့်ဘဲဝါးသည်။ ဤသည်ရလဒ်တစ်စုံတစ်ရာကျုံ့ကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘဲအခန်းအပူချိန်မှာထွက်ခွာနိုင်သည်တစ် gummy ။
သင်၏ gummy စာရွက်တွင်ရှိသောပြောင်းဖူးရည်က၎င်းကိုကောင်းကောင်းချိုမြစေလိမ့်မည်။ ဤစာရွက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အရသာရှိသောအရက်သောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်၏အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အထူးသကြားလုံးအရသာထူးခြားသောအရသာကိုဝယ်ရန်မလိုပါ (မူရင်းစာ၏နောက်ထပ်တိုင်ကြားချက်) ။ အချိုရည်အများစုသည်ချိုမြနေပြီးပြောင်းဖူးရည်နှင့်သကြားဓာတ်များလည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
သငျသညျperfectlyုံ yummy gummies လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှအချို့အရသာသောက်စရာတစ်မျိုးဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့၌သစ်သီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ် Gatorade ကဲ့သို့သောအရာများကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ gelatin (သို့မဟုတ် ဂျယ်လီ သင် gelatin ကိုမသုံးချင်ကြပါလျှင်) ။ ပြောင်းဖူးရည် (သို့မဟုတ်ရွှေရည်)၊ အချိုမှုန့်သကြားနှင့် citric acid (နေရာများရှိကုန်စုံစတိုးဆိုင်ရှိစည်သွပ်ဗူးတွင်တွေ့နိုင်သည်) ။ အရသာပိုမိုပြင်းထန်စေရန် (မုန့်ဖုတ်အပိုင်း၌) အနည်းငယ်သကြားလုံးအနံ့အရသာ။
သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်း gummies ချင်လျှင်, အနံ့အရသာပေမယ့်ပြီးသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် bubbly မဟုတ်သောသောက်စရာကိုသုံးပါသို့မဟုတ်သင်ကသင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအတူတကွရောနှောသောအခါသင်မြှုပ်အများကြီးရလိမ့်မယ်။
အိမ်လုပ် gummies များလုပ်နည်း
ဒီ gummy စာရွက်လက်ပေါ်မှာရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအခြေခံစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အနံ့အရသာရှိသောအရည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖျော်ရည်၊ သစ်သီးသန့်စင်သို့မဟုတ်ဝိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အထူးအပူမလိုအပ်ပါ။
အပူထိန်းနိုင်သည့်ကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်သင်၏သကြား၊ သင်၏အရသာရှိသောအရည်ထဲသို့ထည့်ပြီးညင်ညင်သာသာနှိုးဆော်ပါ။ မည်သည့်လေထုကိုထည့်သွင်းရန်မကြိုးစားပါ။ ငါအရည်အတွက်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုသုံးချင်သော်လည်း gatorade ကဲ့သို့သောအခြားအရာများသည်လည်းအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်လည်းအရသာပိုမိုပြင်းထန်စေရန်သကြားလုံး 1-2 ကျသောသကြားလုံးအရသာကိုထည့်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်ပြီးပျော်စရာပါ!
သင်၏ gelatin အရည်ကိုစုပ်ယူပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိစေရန်အရောအနှောကို ၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။ သငျသညျဤနည်းနည်းအလျင်စလိုလျှင်သင်တို့၏ gummies သူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအချို့ကိုဆုံးရှုံးနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့မဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်အရောအနှောကိုဖြည်းဖြည်းအရည်ပျော်ပါ။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်ပါသည် ငါစက္ကန့် 30 နှင့်အတူစတင်, နှိုးဆော်, 15 စက္ကန့်နှင့်အရောအနှောအပြည့်အဝအရည်ကျိုသည်အထိဤမျှပေါ်ထပ်မံနှိုးဆော်။
သင်၏ပြောင်းဖူးရည်နှင့် citric အက်ဆစ်တွင်ထည့်ပါ။ citric acid သည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည် gummy သကြားလုံးအများစု၌သင်မြည်းစမ်းသည့် yummy“ ကိုက်” ဖြစ်သည်။ သင်ထွက်သွားပါကသင်၏သကြားလုံးက kinda blah ကိုမြည်းစမ်းရုံသာဖြစ်သည်။
သငျသညျအရည်ပထမ ဦး ဆုံးအုံ့နေသည်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့မှီတိုင်အောင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထိုင်ပြီးအမြှုပ်များအားလုံးထိပ်သို့တက်သွားသည်။ သင်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှအမြှုပ်များကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။ ဤအပိုင်းကိုကျော်။ မသွားပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်လှပသောရတနာများကိုရှုပ်ထွေးအောင်ဖြူဖွေးနေလိမ့်မည်။
သင်ရေမြှုပ်ကိုချန်ပြီးတာနဲ့သင်သည်သင်၏မှိုသို့အရောအနှောကိုသွန်းလောင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမှိုမဆိုအမျိုးအစားကိုသုံးနိုင်သည်ဒါပေမယ့်ငါလှပသောကျောက်မျက်မှို Target မှာနှင့် Michael မှာရှိတဲ့ Nerdy Nummies ကနေဒီအခြားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမှိုဆီအင်္ကျီတစ်ထည်ဖြင့်မှိုများကိုဖျန်းပြီးကပ်ထားခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ပိုလျှံမှုကိုသုတ်ပစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ကတော်တော်လေးမြန်မြန်ကုသပေးတယ်၊ တစ်နာရီလောက်သင်လိုအပ်သမျှပဲ။ သငျသညျမှိုကနေကျောက်မျက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နောက်ထပ်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်ကျော်ခြောက်သွေ့ဖို့အချို့သောပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးသူတို့ကိုထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအချိန်နှင့်အမျှ chewier နှင့်ပိုပြီး gummy ရလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကဲ့သို့သူတို့ကိုစားနိုင်ပါတယ်။
သင်ကအိမ်လုပ် gummies ကိုအတူတကွမတွယ်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။
သကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကတော်တော်လေးစေးကပ်နေတယ်။ သူကသူ့ဟာသူနဲ့အခြားအရာအားလုံးကိုကပ်ထားတယ်။ သင်သည်သင်၏ gummies ကိုပြောင်းဖူးဓာတ်နှင့်အနည်းငယ်ဖုန်ထုပ်ပြီးအိတ်တစ်လုံးထဲလှုပ်ခါလိုက်လျှင်၎င်းတို့ကိုကပ်ထားခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်တော်တော်လေးထွန်းလင်းပယ်ရှားသောကြောင့်, ငါသည်ဤ technique ကိုမချစ်ကြဘူး။ ငါ့ gummies ကိုအုန်းဆီအနည်းငယ်ပိုဖြန်းချင်တယ်။ ဒါဟာအရသာအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသူတို့ကိုကောင်းတဲ့နှင့်တောက်ပစောင့်ရှောက်။
Gelatin မသုံးပဲ Gummy Recipe
လူတိုင်းသည်ဂျယ်လတ်ကိုအသားကိုစားရန်မလိုချင်သော်လည်းမလိုချင်ပါ။ Agar သည်အများအားဖြင့် gelatin နှင့်အစားထိုးသည်။ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်အပင်မှမဟုတ်ဘဲအပင်ရင်းမှပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်သက်သတ်လွတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်အစားအစာများနှင့်အခြားအစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
gelatin တစ် agar နှင့်အတူအစားထိုးသည့်အခါရုံရလဒ်များမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ Agar agar သည် gelatin ထက်ပိုမိုအားကောင်းသဖြင့်အနည်းငယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဝက်နှင့်အတူစတင်ကြောင်းအဘယ်မှာရှိသငျသညျရဲ့ဘယ်မှာကြည့်ပါ။ Agar သည် gelatin ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုခိုင်မာသည်။ chewy မဟုတ်သော်လည်းအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Agar Agar ကို Gummy Recipe တွင်အသုံးပြုနည်း
ကွန်တိန်နာပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ၊ သို့သော်သတိရပါ၊ သင်သည် gelatin နှင့်အတူလိုမျိုး agar agar ကိုအရည်ထဲတွင်အခြားအရည်ထဲသို့ထည့်ခြင်းမပြုမီပျော်ဝင်ရပါမည်။ သင်က agar ကိုပျော်ဝင်စေရန်အရည်အရောအနှောကိုပြုတ်ပြီးနောက်တွင်၎င်းကိုထည့်ရန်အခြားအရောအနှောထဲသို့ထည့်ရမည်။
gummy စိန်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေဖို့ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ propel အနံ့အရသာအချို့ကိုသောက်ခဲ့တယ်။ ငါ၏အ Gummy အရောအနှောဖြစ်စေခြင်းငှါငါငါ၏ gelatin, သကြား, citric အက်ဆစ်နှင့်ပြောင်းဖူးရည်ထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဤအရောအနှောသည်ခရမ်းရောင်အစားအစာအရောင်အနည်းငယ်ကိုထိတွေ့ခြင်း (အနည်းငယ်သောအစက်အပြောက်များ) ထည့်ခြင်းဖြင့်အနည်းငယ်မျှသောအဝါရောင် -ish ဖြစ်သည့်အနည်းငယ်တန်ပြန်မှုပြုနိုင်သည်။
ကျန်ရှိသောအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်ဒိန်ခဲအထည်ကို ဖြတ်၍ အရောအနှောကိုစစ်ပါ။ သင်၏အရောအနှောအချို့ကျောက်မျက်မှိုသို့သွန်းလောင်း။ ငါ့မှာကျန်ခဲ့တယ် silicone စိန်မှို ငါဒီအတွက်တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ isomalt ကျောက်မျက်အတွက်သုံးခဲ့တယ်။
ကျောက်မျက်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်အသေးအဖွဲတစ်ခုမှာထိပ်စွန်းကိုဆွဲတင်ပြီးကျောက်မျက်ကိုမှုတ်ထုတ်ခြင်းမပြုမီပထမ ဦး ဆုံးကျောက်မျက်ကိုဖြေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုပုံမှန်အတိုင်းရက်အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ Gummy ကျောက်မျက်ရတနာများထုတ်လုပ်ရန်နှင်းဆီစပျစ်ဝိုင်ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Glitter Gummies လုပ်နည်း
သင်သည်သင်၏ Gummies တွင်အပိုတောက်ပသောအလင်းအနည်းငယ်ထပ်ထည့်လိုပါကသင်သည်သင်၏ gummy အရောအနှောတွင်စားရန်တောက်ပသော 1 Tsp ထည့်နိုင်သည်။ Never Forgotton Designs မှ flash ဖုန်မှုန့်များသုံးခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ဤအ gummies သည်စားရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားသည် ဖြစ်၍ သင်သည် gummy တွင်ထည့်ထားသည့်တောက်ပသောအရောင်ကိုမစားနိုင်သည့်အတွက်သင်အသုံးပြုသမျှသည်အမှန်တကယ်စားနိုင်သောအရောင်တောက်ပပြီးမအဆိပ်သင့်စေရန်သေချာစေပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသောအစစ်အမှန် gummy စာရွက်သည်စစ်မှန်သောအရာကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးအရသာရှိပါသည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၅ မိနစ် ခြောက်သွေ့ချိန်:နှစ် ဃ စုစုပေါင်းအချိန်:ဆယ့်ငါး မိနစ် ကယ်လိုရီ438kcal
အိမ်လုပ် Gummy သကြားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ
▢၁.၇၅ oz (ငါးဆယ် ဆ) သကြားဓာတ်
▢၃ packages များ (နှစ်ဆယ့်တစ် ဆ) အနံ့အမှုန့် gelatin ၂၁ ဂရမ်
▢1/4 Tsp (1/4 Tsp) citric အက်ဆစ်
▢၃ oz (၈၅ ဆ) ပြောင်းဖူးရည်
▢၂.၅ oz (၇၁ ဆ) ဖျော်ရည်ကဲ့သို့ရွေးချယ်မှု၏အရသာအရည် သငျသညျအနံ့အရသာချင်လျှင်သို့မဟုတ်ရေ
▢၁-၂ ပေါက် သကြားလုံးအရသာ တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြင်းထန်သောအရသာသည်
အိမ်လုပ် Gummy သကြားလုံးညွှန်ကြားချက်များ
အပူခံနိုင်သောကွန်တိန်နာအတွင်းရှိသကြားဓာတ်၊ gelatin နှင့်အရသာရှိသောအရည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ပေါင်းစပ်ဖို့ညင်ညင်သာသာရောမွှေပါ။ သင်၏ gelatin ကိုပွင့်လန်းစေရန် ၅ မိနစ်ခန့်ထိုင်ပါ။
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်စက္ကန့် ၃၀ ကြာညင်ညင်သာသာနှိုးဆွပါ။ မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) မီးဖိုသည် ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း ထပ်မံ၍ လှုပ်ခတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အရောအနှောအရည်ပျော်မသွားလျှင်၊ အရည်ပျော်သည်အထိ ၅ စက္ကန့်တိုး။ ဆက်လုပ်ပါ။ ဂျယ်လတ်ဂျင့်သီးနှံများကိုသင်မတွေ့ပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအရည်ပျော်သွားသည်။ လေထဲမထည့်ပါနှင့်
ပြောင်းဖူးရည်နှင့် citric အက်ဆစ်နှင့်သကြားလုံးအရသာထည့်ပါ။ ပေါင်းစပ်ဖို့ညင်ညင်သာသာရောမွှေပါ။
အရောအနှောကို ၁၀ မိနစ်ခန့်ထားပါ။ ပြီးလျှင်အရောအနှောကိုကြည်လင်ပြီးထိပ်တွင်စုဆောင်းထားပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ရေမြှုပ်ကိုဇွန်းဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်အလွယ်တကူသွယ်တန်းနိုင်သည်။
သင်၏ gummies သည်အစတွင်အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကို ၁-၃ ရက်ပတ်လုံးအခန်းအပူချိန်တွင်ခန်းခြောက်ပါစေ။ အညီအမျှရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေရန်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်လှည့်ပါ။ သူတို့ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ chewier ရ။
သင်၏ gummies သည်လိုချင်သောကိုက်ညီမှုတစ်ခုရရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကို ziplock တွင်အိတ်ထဲထည့်။ နောက်မှပျော်မွေ့နိုင်သည်။
ငါကိတ်မုန့်များအတွက် fondant ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာ